Fidarohana lionfika any Karaiba - Manamaivana ny loza ateraky ny karazam-borona manavakavaka ao amin'ny Karibean-dranomasina (MTIASIC) | Reef Resilience
Fandringanana ny lionfika any Karaiba - Manamaivana ny loza ateraky ny karazam-borona manavakavaka ao amin'ny Karibean-dranomasina (MTIASIC)
Oct 7, 2014 | Vaovao
Lionfish dia karazam-boankazo voajanahary amin'ny faritra Indo-Pacific. Na izany aza, tamin'ny taona 1990, noho ny fampidiran'olombelona, ​​dia tonga tao amin'ny Atlantika Andrefana Tropika ny trondro, ary niely nanerana ny morontsiraka atsinanan'i Etazonia. Nanomboka teo dia nifindra monina nanerana ny Basin'i Karaiba sy niditra ny Hoalan'i Mexico ireo trondro liona, nandrahona ny harena voajanahary sy ny toekarena eo an-toerana. Tamin'ny taona 2009, ny Bahamas, Dominican Republic, Jamaica, St Lucia ary Trinidad & Tobago dia namaly izany fandrahonana izany tamin'ny alàlan'ny fampiharana hetsika isam-paritra mitondra ny lohateny hoe Mitigating the Threats of Invasive Alien Spies (IAS) in the Insular Caribbean (MTIASIC). misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVakio ny famoahana ny gazetymanokatra fisie PDF .
Famafàna Lionfish. © Departments of Bahamas of Resources of Marine
Ny Bahamas dia nitarika ny fiarovana ny fanafihan'ny lefona, ka namorona Task Force tandrify alikaola hanangonana antontan-taratasy, fanangonana ary fanalàna ny liona avy amin'ny rano Bahamiana. Ny Taskforce dia ahitana solontena avy amin'ny masoivohon'ny governemanta sy ONG ao an-toerana. Ny vokatra mialoha avy amin'ny tetik'asa fanjonoana hanesorana ny lefona any Bahamas dia manondro fa ny karazan-karazan-javamaniry dia mety mahomby amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina manana tombony be ho an'ny biodiversité sy ny toekarena eo an-toerana.
Rahalahy Frederick Arnett II, Mpanampy ny Mpanampy amin'ny Sampan-draharahan'ny Harin-dranomasina, dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fandraisana andraikitra, nanampy tamin'ny fanentanana ny lionfish, ny fanaraha-maso ary ny fanentanana. Nanontany an'i Mr. Arnett II fanontaniana vitsivitsy mikasika ny fifehezana ny lefona any Bahamas izahay, ary izao no nolazainy:
Inona ireo olana lehibe sy fiantraikany momba ny fanafihan'ny liona any Karaiba?
Any Caraïbes, ny lefona dia mampidi-doza mananontanona ny zavamananaina sy ny toekarena eo an-toerana, indrindra fa ny indostrian'ny jono sy ny sehatry ny fizahan-tany. Ny ankamaroan'ny olona dia mandoko sary vetaveta mikasika ny fiantraikan'ny fanafihan'ny liona any Karaiba. Na izany aza, ny fikorontanana ity mpihetsiketsika hafahafa ity dia namporisika ny asa, ny fifandraisana, ny fiaraha-miasa, ny fifanakalozana ary ny fiheverana mavitrika eo amin'ireo mpifanolo-bodirindrina Karaiba. Ireo fanjakana Karaiba dia niara-niasa mba hizara ny traikefa sy ny teknika ary ny toro-hevitra. Ny governemantany dia voatsikera hanamboatra sy hanavao ny lalàna izay misy ny banga. Ny vondrom-piarahamonina ihany koa dia nalaina ho fandraisana andraikitra ary handray anjara amin'ny ezaka fitantanana.
Inona ny sasantsasany amin'ireo paikady ampiasainao hiatrehana ny lionfisy mitresaka any Karaiba?
Ireto tetikady manaraka ireto dia ampiharina manerana an'i Karaiba mba hamahana ny fanafihana:
Fanentanana fanentanana anisan'izany ny atrikasa momba ny lionfish, fanofanana amin'ny fomba fitantanana azo antoka sy ny valin-kafatra ho an'ny fananiham-bohitra, ny fanatontosana sy ny hetsika kulinarina, ny fifaninanana afisy, ny filazam-baomieram-bahoaka ary ny fandaharam-pampianarana fohy;
Fihetsiketsehan'ny Lionfish. © Departments of Bahamas of Resources of Marine
Fifanakalozam-baovao sy traikefa amin'ny alàlan'ny fihaonambe sy atrikasa
Fanohanana ireo lalao fifaninanana lionfish sy ny afera;
Fanitsiana politika mba hamporisihana ny ezaka amin'ny fanaraha-maso ny lefona;
Fikarohana momba ny tontolo iainana, biôlôgy ary ny fanafihan'ny liona;
Famoronana tsena amin'ny henan'omby.
Inona avy ireo olana atrehinao rehefa miezaka mifehy ny liona any amin'ny faritra misy anao?
Ny fanamby marobe aty Karaiba izay mbola atrehintsika dia:
Ny fahafaha-manararaotra ny olona sy ny fampiofanana azo ampiasaina mba hisamborana, handraisana ary hanesorana ny liona.
Fihetseham-bahoaka ataon'ny mponina ao an-toerana handray anjara amin'ny ezaka atao amin'ny fifehezana ny lefona amin'ny alàlan'ny fanjifàna tsy tapaka;
Famoronana, fampivoarana ary fanamafisana ny tsena eo an-toerana / eo an-toerana ho an'ny hena manta;
Tsy fahampian'ny volavolan-kevitra politika, izany hoe fanitsiana sy famolavolana lalàna vaovao raha ilaina;
Tsy ampy ny famatsiam-bola maharitra mba hanohanana ny ezaka fanesorana tsy tapaka.
Raha tsy voafehy ny populations ny liona, inona no mety ho fiantraikany eo amin'ny fiantraikany any amin'ny faritra Karaiba?
Ny fiantraikany maharitra any Karaiba dia mety hahitana ny fahapotehan'ny karazana biodiversity ao amin'ny faritra. Ity fahavoazana ity dia andrasana hanimba ny fahasalaman'ny tontolo iainana ara-tontolo iainana manan-danja (toy ny haran-dranomasina, ny ala honko, ny ahitra any an-dranomasina, sns) ary ny toe-karena eo an-toerana (ohatra fisaka sy ny sehatry ny fizahan-tany) miankina amin'izy ireo.